Timir  ; 9 April 1336 - 18 Febraayo 1405), taariikh ahaan waxaa loo yaqaan Amir Timur iyo Tamerlane  (Persian: تيمور لنگ Temūr (-i) Lang, "Timur Lame "), wuxuu ahaa Turki-Mugol. Maaddaama uu aasaasay Boqortooyada Timirid ee Faaris iyo Bartamaha Aasiya, wuxuu noqday taliyihii ugu horreeyay ee ka soo jeeda Boqortooyada Timurid  Sida laga soo xigtay John Joseph Saunders, taariikhda Timur waa la naqdiyay oo aan ahayn reer-guuraalayaal ah. Wuxuu ku dhashay waddanka Transoxiana ee kuyaala Transoxiana (9-kii Abriil 1336, Timur wuxuu xakameynayay galbeedka Chagatai Khanat 1370. Wuxuu ka soo jeeday ololaha militariga ee galbeedka, koonfurta iyo bartamaha Aasiya, Caucasus iyo koonfurta Ruushka , oo u muuqday in uu yahay hoggaamiyaha ugu awoodda badan adduunka muslinka ah ka dib markii uu jabiyay mishiillada Masar iyo Suuriya, ee soo ifbaxaya Boqortooyada Ciraaq, iyo hoos u dhaca Delhi Sultanate  Laga soo bilaabo qabqablayaashaasi wuxuu aasaasay Boqortooyada Timirayd, laakiin Boqortooyadaasi way kala gooyay wax yar ka dib dhimashadiisa. Qabashada Delhi (1398)
Timur waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay hufnaan milatari, iyo sidii qof takhasus leh oo awood leh oo awood u leh in uu ka shaqeeyo nidaam siyaasadeed oo dheellitiran si uu u guuleysto loona ilaaliyo daacadnimo daacad ah oo reer guuraa ah inta lagu jiro xukunkiisa Central Asia. Waxaa sidoo kale loo tixgeliyey inuu yahay mid caqligal ah oo aan caqligal ahayn, laakiin sidoo kale xitaa maskax ahaan. : 16 Samarkand iyo safarradiisa badan, Timur, oo hogaamiyay aqoonyahano kala duwan, waxay awoodeen inay bartaan luqadaha Faaris, Mongolian, iyo Turkiga. ]: 9 (sida uu qoray Axmed Iimaan Carshax, Timur ma uusan aqoonin Carabi)  Taasina waa muhiim, Timur waxa lagu tilmaamaa fursad ah fursad. Isagoo ka faa'iideysanaya hidaha Turco-Mongolian, Timur wuxuu si joogta ah u isticmaalay diinta Islaamka ama sharciga iyo dhaqanka Boqortooyada Mongol si uu u gaaro himiladiisa milatari ama himilooyinka siyaasadeed ee gudaha. Timur, inta badan loo tixgeliyo barbariyiin, dhab ahaantii waxay ahayd boqor wanaagsan oo wax bartay, oo ku raaxeystay shirkadda culimada - waxay ahayd dulqaad iyo naxariis leh iyaga dabiicaddiisa.
Ciidamada Ammaanka Timir ayaa weerara kuwa ka badbaaday magaalada Nerges ee gobolka Georgia, guga 1396. Ka dib dhimashadii Abu Sa'id, oo ahaa hoggaamiyaha Ilkhanatiga, 1335, waxaa jiray awood fara badan oo ku timid Faaris. Dhamaadkii Persia waxaa lagu kala qaybiyey Muzaffarids, Kartids, Eretnids, Chobanids, Injuids, Jalayirids, iyo Sarbadars. Sanadkii 1383, Timur wuxuu bilaabay inuu guulaysto ciidankii Faaris ee dheeriga ahaa, inkasta oo uu horay u xukumay in badan oo ka mida Khorasan 1381, ka dib markii Khwaja Mas'ud, oo ka tirsan qabiilka Sarbadar. Timur wuxuu bilaabay ololihiisa Faarax ee Herat, oo ah caasimad ka mid ah hoyga kartid. Marka Herat uusan is dhiibin, wuxuu magaalo ahaan ku dhuftey burburinta iyo xasuuqay inta badan muwaadiniinteeda; waxay ku jirtey burburka ilaa Shahrukh Mirza uu amrey dib u dhiska.  Timur ayaa markaa u diray Xog-hayaha si ay u qabtaan Kandahar caasimadiisa. Iyada oo qabashada Herat boqortooyada Kartid ayaa isdifaacay waxayna noqdeen nuucyo Timur; waxaa dib loo dhisi doonaa si toos ah oo ka yar toban sano ka dib ee 1389 by ina Timur ina Miran Shah. Timur wuxuu markaas u socday dhinaca galbeed si uu u qabsado Buuraha Zagros, oo ka sii gudba Mazandaran. Intii uu safarka ku marayay waqooyiga Faaris, wuxuu qabsaday magaalada kadibna magaalada Tehran, oo isdifaacay, sidaas darteedna naxariis buu u qabay. Wuxuu qabsaday Siyaad Barre sannadkii 1384.
Delhi ka dib markii la ceyriyay Timur Lang, 1398 Dagaalku wuxuu dhacay 17kii Diseembar 1398. Sultan Nasir-ud-Din Mahmud Shah Tughqaq iyo ciidamada Mallu Iqbal  waxay maroodiyaal dagaalyahanno hubeeysan u direen waraaqo silsilad ah oo sumaysan oo faya-qabadkooda ah. : 267 isaga oo ka cabsanaya maroodiga, Timur wuxuu amar ku bixiyay raggiisa inay qodaan godad hor leh oo ka mid ah jagadooda. Timur ayaa markaa geel uu geela ku raray alwaax qoryo iyo caano sida ay u qaadi lahaayeen. Marka maroodiga la soo weeraro, Timur wuxuu dab qabadsiiyay dabka oo wuxuu kufsaday geela ulaha birta, iyaga oo u horseeday in ay maroodiga ku xayiraan xanuunka: Timur wuxuu fahmay in maroodiga si sahlan loo argagaxay. Waxay la kulantay muuqaal qurux badan oo geel ah oo u duulaya si toos ah iyaga oo ololka ka soo boodaya dhabarkooda, maroodiyaashu waxay ku soo jeesteen oo ku dhajiyeen xadhigooda. Timur ayaa ku soo booday burburkii dambe ee ciidamadii Nasir-ud-Din Mahmud Shah Tughaq, isagoo ku guuleystay guusha sahlan. Nasir-ud-Din Mahmud Shah Tughluq ayaa ka cararay haraadiga ciidamada. Daarood ayaa la ceyriyay isla markaana ka tagay burbur. Intii uu dagaalku u socday Delhi, Timur wuxuu fuliyay 100,000 maxbuus.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Timur&oldid=190458"
Last edited on 1 Febraayo 2019, at 12:56
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 1 Febraayo 2019, marka ee eheed 12:56.